Kodiarana kaopy diamondra Mpanamboatra sy mpamatsy | China Diamond Cup Wheels Factory
Kodiaran'ny kaopy Turbo 5 mirefy ho an'ny angle grinder
Turbo Diamond Cup Wheel; Ny fifantohana diamondra avo ho an'ny fiainana lava sy ny fanesorana fitaovana mahery vaika. Manasongadina fizarana fitotoana lehibe miaraka amin'ny vatana vy vita amin'ny hafanana izay mampitombo ny faharetana sy ny fiainan'ny kodiarana.
Kodiarana fikosoham-bary turbo vy 100mm ho an'ny simenitra, granita, marbra
Ireo kodiaran'ny kaopy ireo dia azo ampiasaina amin'ny tetikasa maro isan-karazany manomboka amin'ny famolavolana sy fanosehana ny tampon-trano sy ny gorodona simenitra, ka hatramin'ny fikosoham-bary mahery vaika na ny fanamafisam-peo sy ny fanesorana ny coating. Ny fototry ny vy mavesatra dia manome faharetana maharitra.
Kodiaran'ny kaopy fikosoham-bary diamondra 7 mirefy lava
Brazed diamondra fikosoham-bary kodia no mahomby indrindra ho an'ny maina na lena ampiasaina amin'ny fikosoham-bary haingana, henjana debarring, malama endrika ny ambonin'ny, sisiny sy ny zorony granita, marbra, simenitra sns masonry fitaovana. Ny endrika lehibe kokoa sy matevina kokoa dia mampitombo ny androm-piainany.
180mm Kodiarana fikosoham-bary betonika miolikolika lehibe
Kodiaran'ny kaopy diamondra 7" ho an'ny fikosoham-bary mahery vaika, lakaoly ary fanesorana ny coating maivana. Tsara ho an'ny fampiharana amin'ny ankapobeny amin'ny simenitra sy masonry, ao anatin'izany ny: fanadiovana, fanamafisam-peo, fanotofana ary fanesorana ny coating. Ny fizarana diamondra lava dia manome androm-piainana tsara kokoa.
Kodiarana fikosoham-bary 7 mirefy T Shape ho an'ny simenitra
Kodiaran'ny kaopy T-Segment 7 mirefy RIDGID dia vita amin'ny vovoka diamondra Hi-Grade miaraka amin'ny fatorana manokana natao ho an'ny famotehana ambony indrindra. Namboarina tamin'ny fizarana turbo ho an'ny fikosoham-bary mahery vaika, fampitandremana ary fanesorana ny simenitra. Ho an'ny fampiasana amin'ny angle grinders.
Kodiaran'ny kaopy diamondra 180mm misy ampahany amin'ny rhombus
Ho an'ny fitotoana simenitra, granita mafy, marbra, vato novolavolaina, sns. Ny kodiaran'ny kaopy diamondra dia natao ho an'ny fikosoham-bary maina, fanamafisam-peo ary famolavolana Tena tsara ho an'ny fanomanana ambonin'ny tany. Mety amin'ny fitotoana, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingana sy ny fiainana tsara.
Kodiaran'ny kaopy turbo 5 mirefy ho an'ny simenitra sy vato
Ny kodiaran'ny kaopy diamondra turbo dia ampiasaina betsaka amin'ny fitotoana karazana gorodona simenitra. Ny kodiaran'ny kaopy dia mifanandrify amin'ny grinder anjely sy ny gorodona. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny fikosoham-bary avo lenta, ny kodiaran'ny diamondra turbo dia tsy hikorontana na hikorontana rehefa mitoto. Lava ny androm-piainany sy ny fampisehoana maharitra.
Kodiaran'ny kaopy PCD 5 mirefy ho an'ny epoxy, lakaoly, fanesorana loko
Ny kodiaran'ny kaopy diamondra PCD dia ampiasaina amin'ny fanesorana ny coating isan-karazany toy ny epoxy, lakaoly, mastic, acrylic, sisa tavela amin'ny adhesive sy screed. Tsy hameno na hanosotra ny coating toy ny kodiarana kaopy diamondra.
Kodiaran'ny kaopy Hilti 150mm ho an'ny gorodona
Mamorona famenoana ety ambonin'ny tany amin'ny fampiasana fangaro diamondra abrasive tsara. Noforonina haharitra ela kokoa – manampy anao hahavita bebe kokoa amin'ny kodiaran'ny kaopy iray ihany. Vibration ambany - ny teknolojia fampifandanjana fototra avo lenta dia manampy anao hihazona ny fifehezana mafy ny angle grinder. Turbo rim - natao hanafainganana ny fikosoham-bary.
125mm zana-tsipìka fizarana kodiaran'ny kaopy fikosoham-bary diamondra
Ny kodiaran'ny kodiaran'ny kodiaran'ny arrow dia novolavolaina tamin'ny vovoka diamondra indostrialy ambony indrindra ho an'ny fahombiazan'ny fikosoham-bary sy ny androm-piainany ambony. Ny fizarana fikosoham-bary novolavolaina manokana dia manome fahombiazana ambony indrindra amin'ny vidiny mora indrindra amin'ny kodiaran'ny kaopy.
Kodiaran'ny kaopy fikosoham-bary 7 mirefy metaly
Ity karazana kodiaran'ny kaopy fikosoham-bary diamondra ity miaraka amin'ny fizarana miolikolika lehibe 3pcs dia manome tombony miavaka amin'ny hafainganam-pandeha rehefa manodina simenitra. Raha ampitahaina amin'ny kodiaran'ny kaopy hafa misy ampahany 5mm ny hateviny, ireo fizarana 10mm hahavony ireo dia manome fiainana mikoriana be loatra.
Fizarana zana-tsipìka 7 mirefy Kodiaran'ny kaopy diamondra fikosoham-bary ho an'ny mpanodina simenitra
Ny kodiaran'ny kaopy zana-tsipìka dia ampiasaina amin'ny fanesorana ny coating manify sy ny fanomanana ny tany. Ny famolavolana fizarana dia manome ny fizarana tsirairay mifandray amin'ny velaran-tany bebe kokoa ary mamela ny mpandraharaha hifehy bebe kokoa amin'ny tsy fahafahana mihady amin'ny tany.